२९ साउन - स्वतन्त्र छोरी र मुक्त आमाहरू चाहँदैन, यो देश। बरु गर्वसहित गर्भ बोकेर हिँड्ने आमालाई औंला ठड्याएर सोध्छ– कसको भुँडी बोकेकी?
२७ साउन - मधेसमा डिम्पल झाले निकालेको वा उनको स्वागतमा निक्लेको परेड न त पहिलो थियो, न त अन्तिम नै हुनेछ।
२५ साउन - आवश्यकता अनुसार श्रीमती, श्रीमान्, साथी, हाकिम, छोराछोरी, बुबाआमा र डाक्टरसँग झूट बोल्ने मानिसले डिजिटल यूगमा एउटा ठाउँमा मात्रै सत्य कुरा बोल्दछ। त्यो कहाँ होला?
‘लुक साउथ’ होइन, दक्षिणबाट लाभ
२३ साउन - अमेरिकाले आफ्नो ‘इण्डो प्यासेफिक’ नीतिमा भारतलाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको छ।
इमरानको पाकिस्तान ‘प्रो चाइनिज’, भारत विरोधी?
१९ साउन - नयाँ प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै कुनैपनि देशको परराष्ट्र नीतिमा तत्काल नै परिवर्तन आउँदैन। तर सरकार प्रमुखले भने परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ गति दिनसक्छन् र कालान्तरमा नीति नै परिवर्तन हुनसक्छ।
भारत छोडेर भुटान किन चीनसँग नजिकिँदैछ?
१० साउन - जुलाई २२ देखि २४ मा चीनका उपविदेश मन्त्री कोङ सुआनयुले भुटानको तीन दिने भ्रमण गरे।
चिनियाँ रेलमा नेपालले जित्छ कि हार्छ?
८ साउन - प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरेर रेलको विषयमा सर्वाधिक चर्चा कमाए। तर दुवै देशको रेल नेपालभित्र छिर्दा पर्नसक्ने दीर्घकालीन नाफाघाटाको पूर्वानुमानबारे ठोस अवधारणा बनाउन कति ढिलो गरेको?
७ साउन - यतिवेला डा. गोविन्द केसी चर्चाको शिखरमा छन्। आफ्नो दृष्टिकोण, बुझाई र ज्ञानका आधारमा आफुले देखेको संसार निर्माणका लागि उनी सरकारलाई मन्जुर बनाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्।
२४ असार - दुई वर्षअघि सञ्चारको आधुनिक माध्यमका रुपमा नेपालखबर डटकम प्रारम्भ भएको थियो। अनलाइन मिडियामा व्यावसायिक र विश्वसनीय रुपमा प्रस्तुत हुने र डिजिटल संवाद फोरमका रुपमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई जोड्ने उद्देश्यमा नेपालखबरले सफलता हासिल गरेको छ।
२४ असार - मात्र ३ लाख ३० हजार जनसंख्या भएको आइसल्याण्डले रसियामा भएको विश्वकप फुटबल खेल्दै गर्दा एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन भने कहिले विश्वकपमा पुगिएला भनेर सोचिरहेको छ।
१२ असार - अहिलेसम्मको संकेत हेर्दा सी नेपाल आउँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने सम्झौता हुन सक्नेछ।
९ असार - चिनियाँ रेल नेपालमा गुडाउनका लागि नेपालले एउटा काम चाहिं हतारोमा गर्नुपर्छ, त्यो हो चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण।
३ असार - पचासौँ वर्षदेखि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग खुलेर छलफल गर्नुपर्छ।
२९ जेठ - चीनसँगको सम्बन्धमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि तीन विकल्प छन्। पहिलो विकल्प हो, नाकाबन्दीको बेला जस्तै अडान लिने, जसमा जाने संभावना छैन। दोस्रो विकल्पमा जान सक्दा पनि ओलीको ठूलो कुटनीतिक सफलता, सामथ्र्य र चातुर्यता मानिनेछ।
२७ जेठ - १३ खर्बको बजेटबारे अध्ययन, विश्लेषण वा टिप्पणी गर्ने १३ जना मधेसी पनि देखिएका छैनन्। तर फोरमको सत्तारोहण वा प्रदेश–२ को प्रान्तीय सरकारमा फोरम-राजपा गठबन्धनको भविष्यबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न कम्तिमा १३ हजार मधेसीहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन्।
१४ जेठ - ‘प्रत्येक दिन संसारमा भइरहेको परिवर्तनलाई म निगरानी गरिरहेको हुन्छु। म फेसबुक, ट्वीटर चलाउँछु र टिभी हेर्छु। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रत्येक दिन मानिसहरु मेरो घरमा व्यक्तिगत रुपमा संसारभरका बारेमा मसँग कुरा गर्न आउँछन्’ ज्ञानेन्द्रले भने।
१३ जेठ - अबको नेपाली राजनीति ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कि धेरै अधिकार केन्द्रमै राख्ने’ भन्ने सवालमा ध्रुबीकृत हुनसक्छ। यो ध्रुबीकरणले भविष्यमा प्रदेश केन्द्रित नयाँ दलहरुको उदय गराउने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन।
१ जेठ - भारतका कीर्ति आजादहरुले जनकपुरलार्इ भारतमा गाभ्नुपर्छ भनिरहेकै दिन, जनकपुरमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना दुखेसो पोखिरहेका छन्। यसलार्इ म कसरी समयको खेल भनौं?
३१ बैशाख - हाम्रै देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई त नाकाबन्दी भन्नका लागि दुई वर्ष लाग्यो भने भारतले तात्तातै भनिहाल्छ भन्ने अपेक्षा कति पूरा होला?
३० बैशाख - जुन पार्टीका मन्त्रीले उतिबेला मोदीको जनकपुर भ्रमण नहोस् भन्ने चाहेका थिए, त्यही पार्टीको सरकार र मन्त्रीहरु मोदीको जनकपुर भ्रमण सफल गराउन खटिए।